घटना र विचार, न्युज डेस्क ! 8 months ago June 15, 2019
पूर्वीय मान्यताअनुसार बिहानको कुखुराको डाकसँगै उठ्नुपर्छ अर्थात् बिहान सबेरै उठ्नुपर्छ । घाम झुल्कने बेलासम्म सुत्नुहँुदैन, अन्यथा ‘अलच्छिन’ लाग्दछ । पूर्वीय मान्यतामा जे–जस्तोलाई ‘लच्छिन’ भनिन्छ शरीर तथा स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुने कुरालाई भनिन्छ र जे–जस्तोलाई अलच्छिन भनिन्छ शरीर तथा स्वास्थ्यलाई बेफाइदा हुने कुरालाई भनिने गरिन्छ । फाइदाबारे व्याख्या–विश्लेषण गरेर बताइरहनुभन्दा एकै शब्द ‘लच्छिन’ हो भन्दिने र बेफाइदाहरूबारे व्याख्या गरिरहनुको सट्टा एकै वाक्यमा ‘अलच्छिन’ भनिदिँदा सकिने भएर त्यस्तो शब्द प्रयोग गरिएको अनुमान गर्दा फरक नपर्ला ।
पूर्वीय चालचलनअनुसार खाना सामान्यतया दिनमा तीनपटक मात्र खाइन्छ । बिहानको खाना ८–१० बजे, दिउँसोको लन्च १–३ बजे अनि बेलुकाको खाना ६–८ बजे । बिहान ‘ब्रेकफास्ट’ खाने चलन हुँदैन । बिहानको खाना ओजिलो खाने चलन रहन्छ किनकि दिनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नको लागि बढी तागतको जरुरी पर्दछ । लन्च र डिनरचाहिँ हल्का खाने चलन हुन्छ । मेरी हजुरआमा बेलुकाको खाना थोरै खाए बल धेरै खाए मल भन्ने गर्नुहुन्थ्यो किनकि बेलुका खाएपछि काम केही हुँदैन बिहान उठेपछि दिशा गर्नपऱ्योअनि मल भएर जाने भयो । खासमा बेलुकाको खाना ओजनदार खाइयो भने पाचन प्रक्रियामा शरीर सक्रिय हुन्छ जसले गर्दा सुताइमा असर गर्छ । त्यस्तै त्यसले तागत सिर्जना गर्दछ, तर त्यो प्रयोगमा नआउने भएकाले पनि शरीरलाई हानिकारक हुन्छ ।
जिर्णे हितं भितं चाद्धान्नं बेगिनरयद् बलात्
न बेगितोड्न्यकार्यः स्थान्नजित्वा साध्यामाममयम्
हाम्रो पूर्वीय संस्कारमा मासु पनि एकदमै कम खाने प्रचलन हुन्छ । मासुलाई एक अशुद्ध भोजनको रूपमा लिइन्छ, त्यसैले औँसी, पूर्णिमा, एकादसी, श्राद्ध, पूजापाठ लगाउँदा मासुलाई बिटुलो मानिन्छ । मान्छे मरेको बेलामा मासु खान हँुदैन भन्नुको कारण पनि मान्छे मरेपछि ऊ शोकमा, चिन्तामा हुन्छ र मासुमा बढी पौष्टिकता हुने हुनाले पचाउन शरीरले बढी शक्ति खर्च गर्नुपर्छ जुन शोकाकुल व्यक्तिको शरीरले त्यो शक्ति सिर्जना गर्न सक्दैन । गाउँघरतिर साकाहारीहरूले मान्छे मरे घाट जन्तु मरे पेट भनेर मासु खानेहरूलाई व्यङ्ग्य गर्दथे । हुन पनि मान्छे मरेर गाडेको ठाउँमा भूतप्रेत लाग्छ जान हुँदैन भन्ने अनि आफ्नो पेटमा चाहिँ कति जन्तु चिहान छ ख्याल नगर्ने ? पाश्चात्य खानपिनमा अत्यधिक मात्रामा मासुको प्रयोग हुन्छ । सुपरमार्केटतिर कुनै न कुनै मासु नमिसिएको खाना हँुदैहँुदैन भन्दा पनि हुन्छ । मासुमा अझ धेरै गाईको मासु प्रयोग हुन्छ । यहाँ त मासु भनेकै गाईको भनेर बुझिन्छ । गाईको मासुमा अत्यधिक रातोपना हुन्छ जुन एकदमै हानिकारक हो । त्यसैले यहाँ गर्भवती महिलालाई गाईको मासु नखान भनिन्छ ।
गाईको मासु हिन्दूहरूले किन खाँदैनन् भन्ने सन्दर्भमा एउटा अनुभव सुनाउन मन लाग्यो । म केही वर्ष पहिला एउटा फ्रेन्च मल्टिनेसनल कम्पनीमा काम गर्दथेँ । त्यहाँ काम शुरु गर्दा त्यहाँको पुराना कामदार (उनी मुस्लिम धर्मावलम्बी थिए)सँग हिन्दूहरूले गाईको पूजा गर्ने र गाईको मासु नखाने सम्बन्धमा डिसकस पऱ्यो । उनले के तर्क गरे भने, मान्छे एक चेतनशील प्राणी हो, त्यसैले मान्छे प्राणीमा सर्वश्रेष्ठ पनि छ । त्यो सर्वश्रेष्ठ प्राणीले गाई जो–जहाँ बस्छ त्यहाँ दिसा गर्छ त्यसलाई कसरी पूजा गर्न सक्छ । मैले उनलाई छुट्टै बोलाएँ र भनेँ– तिमी आफू मान्छे हो र चेतनशील हो भन्छौ भने त्यहीअनुसार सोच्ने बानी पनि बसाल । हिन्दूहरूले गाईलाई किन खाँदैनन् भने हिन्दूधर्म सबैभन्दा पुरानो धर्म हो परापूर्वकालमा जतिखेर मान्छेहरू जङ्गलमा बस्थे त्यतिखेर गाईलगायत अन्य जीवजन्तुहरू पनि सीमित हुन्थे । त्यतिखेर स्वास्थ्यचौकीहरू हुँदैनथ्यो, यदि कोही गर्भवती महिलाले बच्चा जन्माएपछि मृत्यु भयो भने बच्चालाई बचाउने एक मात्र उपाए भनेको गाईको दूध हुन्थ्यो । त्यतिखेर खानेकुराको पनि अभाव हुने हुनाले कसैले गाईलाई मारेर खायो भने त बच्चा पनि मर्ने भयो, त्यसैले गाईलाई आमा वा भगवान् मानेर पूजा गरिएको अनि नखाने चलन चलाइएको हो । तिमी आफैँ पनि गाईको दूध खाएर हुर्केका हौ । आफ्नी आमालाई सम्मान गर्ने अनि आमासरह दूध खुवाउने गाईलाई चाहिँ अपमान गर्ने भनिदिएँ । अनि गाईलाई बाँधेर राखिने भएकाले पो जहाँ बस्छ त्यहीँ दिसा गर्छ, सधैँ छाडा छाड्ने हो भने त उसले पनि फरक ठाउँमा गएर गरिहाल्छ नि । हिन्दूधर्मको हरेक चालचलन वैज्ञानिक छन्, ती सान्दर्भिक छन् । हुन सक्छ अहिलेको सन्दर्भमा कतिपय असान्दर्भिक होला, तर जतिखेर चालचलन चलाइए त्यतिखेर एकदमै सान्दर्भिक भएकाले चलाइएको हो ।
एश्वर्य लोभान्मोहाद बागच्छेद यानेन यो नरः ।
निष्फल तस्य तत्तिर्य तस्माधान विवर्जयेते ।।